Yintoni ukuzinza: iimpawu kunye neentlobo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 14/04/2022 12:00 | Yendalo
Imekobume iya ichatshazelwa zizenzo zabantu. Injalo isantya esisebenzisa ngaso ubuncwane bendalo kangangokuba umhlaba ungabi nalo ixesha lokuzihlaziya. Kule nto, ingcamango yokuzinza yazalwa. Abantu abaninzi abazi yintoni uzinzo Kwaye yenzelwe ntoni ekuhambeni kwexesha?
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba yintoni uzinzo, yintoni imiba yalo kunye neenzuzo kuluntu kunye nokusingqongileyo.
1 yintoni uzinzo
2 Ingcamango yozinzo kwinqanaba lentlalontle
3 Iindidi zozinzo
3.1 uzinzo lokusingqongileyo
3.2 Ukuzinza kwezoqoqosho
4 Imizekelo yoZinzo
Ukubeka ngokulula, ukuzinza kukulawula izibonelelo ukuhlangabezana neemfuno zangoku ngaphandle kokubeka iimfuno zexesha elizayo emngciphekweni. Oku kuthathela ingqalelo uphuhliso lwentlalo, uqoqosho kunye nokukhuselwa kwendalo kwisakhelo solawulo. Ekuqaleni, uzinzo luthatha ukuba indalo kunye nokusingqongileyo ayizizo izixhobo ezingapheliyo ekufuneka ikhuselwe kwaye isetyenziswe ngokunengqiqo.
Okwesibini, uphuhliso oluzinzileyo lumalunga nokukhuthaza uphuhliso lwentlalo kunye nokufuna indibaniselwano yoluntu kunye nenkcubeko. Ngaloo ndlela, ifuna ukufikelela kwinqanaba elanelisayo lomgangatho wobomi, impilo kunye nemfundo. Okwesithathu, uzinzo luqhuba ukukhula koqoqosho kwaye ludala ubutyebi obulinganayo kubo bonke ngaphandle kokonakalisa okusingqongileyo.
Uzinzo luchazwa njengo ukuhlangabezana neemfuno zangoku ngaphandle kokubeka esichengeni amandla ezizukulwana ezizayo ukuhlangabezana neemfuno zabo, ukuqinisekisa ukulingana phakathi kokukhula koqoqosho, ukukhuselwa kwendalo kunye nentlalontle yoluntu.
Ingcamango yozinzo kwinqanaba lentlalontle
Uzinzo ke ngoko ngumzekelo wenkqubela phambili egcina olu lungelelwano lubuthathaka namhlanje ngaphandle kokubeka emngciphekweni ubuncwane bangomso. Ukuyifumana kuyimfuneko ukusebenzisa umgaqo we-3 rs, umgaqo we-5 rs, kunye nokunciphisa inkunkuma kunye nenkunkuma. Ngezenzo ezifana nezi, sinokulwa nokutshintsha kwemozulu kunye nokufudumala kwehlabathi.
Umbono okhoyo ngoku wozinzo wavela okokuqala kupapasho lweBrundtland Report ngowe-1987, ekwaziwa ngokuba yi “Our Common Future.” Ngoko ke, uxwebhu olulungiselelwe iZizwe Ezimanyeneyo lolokuqala ukulumkisa ngefuthe elibi lophuhliso loqoqosho nomanyano lwamazwe ngamazwe. okusingqongileyo. Ngoko ke, iZizwe Ezimanyeneyo zizama ukunikela izicombululo kwiingxaki ezibangelwa kukukhula kwemizi-mveliso nokwanda kwabemi.
Uzinzo lufakwe kwiikhonsepthi ezininzi ezinxulumeneyo, ezinje uzinzo lokusingqongileyo, uzinzo loluntu kunye nozinzo loqoqosho. Ngoko ke, imingeni emininzi ejongene noluntu, njengokutshintsha kwemozulu okanye ukunqongophala kwamanzi, inokulungiswa kuphela kwimbono yehlabathi kunye nokukhuthaza uphuhliso oluzinzileyo.
Uzinzo lokusiNgqongileyo yinkqubo egxile ekukhuseleni izityalo nezilwanyana ezohlukeneyo ngaphandle kokuncama inkqubela kwezoqoqosho nezentlalo.
Ibhekisa kwisakhono somba webhayoloji ukugcina imveliso kunye neyantlukwano ngokuhamba kwexesha, ngaloo ndlela ikhuthaza uxanduva lwengqiqo ngokubhekiselele kwi-ikholoji ukukhusela ubutyebi bendalo, ngelixa ikhuthaza uphuhliso lwabantu ukukhathalela imo engqongileyo abahlala kuyo. Kukho iinkampani ezininzi kunye namashishini aqhuba olu tshintsho ngoku.
Ukuzinza koqoqosho kuqinisekisa ukuba imisebenzi efuna ukuzinza kokusingqongileyo kunye nentlalo inenzuzo.
Ibhekisele kwi ukukwazi ukwenza ubutyebi ngendlela yeemali ezaneleyo, yokulingana kwiinkalo ezahlukeneyo zentlalo, amandla kunye nokusombulula iingxaki zezoqoqosho zabemi, kunye nokomeleza imveliso kunye nokusetyenziswa kwecandelo lokuvelisa imali. Ngamafutshane, ukwanelisa iimfuno ngaphandle kokuncama izizukulwana ezizayo kukulingana phakathi komntu nendalo.
Uzinzo loluntu lufuna umanyano kunye nokuzinza kwabemi. Ibhekisa ekwamkeleni iinqobo ezivelisa iimpawu zokuziphatha ezinje ngexabiso lendalo, ukugcina a inqanaba elihambelanayo nelenelisayo lemfundo, uqeqesho nokwazisa, baxhase abantu belizwe ukuba baziphucule kwaye bagcine umgangatho wokuphila olungileyo, nokukhuthaza intatho-nxaxheba yabemi. aba bantu kwabo Yenza into entsha kuluntu lwanamhlanje.
Ukuzinza kwezopolitiko kufuna ulawulo olunemithetho ecacileyo yokulungelelanisa okusingqongileyo, uqoqosho kunye noluntu. Ibhekisa ekwabiweni ngokutsha kwamagunya ezopolitiko nezoqoqosho, urhulumente onemithetho engaguqukiyo, urhulumente okhuselekileyo, ukusekwa kwenkqubo-sikhokelo yomthetho ethi. iqinisekisa ukuhlonelwa kwabantu kunye nokusingqongileyo, kunye nokukhuthaza ubumbano phakathi koluntu nemimandla ukuphucula umgangatho wobomi babo. ubomi Ukunciphisa ukuxhomekeka koluntu ekuyilweni kwemibutho yedemokhrasi.
Ngezantsi kukho imizekelo yophuhliso oluzinzileyo ukuze kusetyenziswe le ngcamango kuzo zonke iinkalo zobomi bethu.
Kwinqanaba lamazwe ngamazwe, kukho imibutho eyahlukeneyo ziyasikhokela kwaye zisikhaphe kwindlela eya kuphuhliso oluzinzileyo kunye nezinye izihloko ezifana nokukhathalela okusingqongileyo, ukufudumala kwehlabathi, ukutshintsha kwemozulu, njl.
IQonga lePolitiko elikwiNqanaba eliPhezulu loPhuhliso oluZinzileyo, isiphumo seNkomfa yeZizwe eziManyeneyo ye-2012 ngoPhuhliso oluZinzileyo (i-Rio+20), ithathe indawo yeKhomishini yoPhuhliso oluZinzileyo. IForam liqumrhu elincedisayo leBhunga lezoQoqosho nezeNtlalo kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
IKomishoni yoPhuhliso oluZinzileyo liqumrhu elincedisayo leBhunga lezoQoqosho neNtlalo kwaye inoxanduva oluphambili kuyo yonke imiba yokusingqongileyo. IPhaneli yoRhulumente kuTshintsho lweMozulu liziko elikhethekileyo leengcaphephe eliphonononga uphando lwezenzululwazi kwaye lixelele abenzi bomgaqo-nkqubo.
IForam yeZizwe eziManyeneyo ngamaHlathi liqumrhu elincedisayo leBhunga lezoQoqosho neNtlalo; yenza umsebenzi wezigqeba ezimbini ezandulelayo ezidweliswe ngezantsi. INkqubo yokusiNgqongileyo yeZizwe eziManyeneyo (UNEP) sisithethi sendalo esingqongileyo kwiNkqubo yeZizwe eziManyeneyo. I-UNEP isebenza njenge-catalyst, ixhobisa, ititshala kunye nomququzeleli wokusetyenziswa ngobulumko kunye nophuhliso oluzinzileyo lwemo engqongileyo yehlabathi.
Njengoko ubona, yonke le miba ibalulekile kulondolozo lwendalo esingqongileyo kunye nokuphuculwa koqoqosho noluntu. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuba yintoni uzinzo kunye nokuba yintoni inzuzo yalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » yintoni uzinzo
izityalo ezihlambulula umoya